रुदै घर गए लडाकुहरु |
रुदै घर गए लडाकुहरु
Posted on January 14, 2010 by Yonepal
माओवादीका लडाकुहरुलाई घर फर्काउने कार्य सुरु भइरहेको छ। केही लडाकुहरु घर फर्किसके पनि । दस बर्षसम्म देशमा युद्ध गरेका लडाकुहरु अहिले आएर घर फर्कनु पर्दा अति पीडा बोध गरेका छन्।
लडाकुहरुको न त विगतदेखिनै साथ दिइरहेको माओवादी पार्टीले नै उचित व्यवस्था गर्न सक्यो न त राज्य पक्षबाट । उनीहरुले त केवल पाए अयोग्य लडाकुको विल्ला मात्र ।
सोच्नेले के पनि भन्छन होला के हो दश वर्षे युद्ध गर्नु सबै पछि आएका तर त्यतिले मात्र उनीहरुको परिभाषा पुग्दैन केहीपछि आएर थपिएका भए पनि केही दस वर्षसम्म पार्टीमा रहेर काम गरेका हुन्। उनीहरुलाई पार्टीले राम्रो गर्न सकेन भन्ने नै सबैको ठम्याई छ।
आँखामा आशु र वेदनापूर्ण अनुहार लिएर बस चढ्दाको क्षण कत्तिको पीडा दायी भयो भन्ने कुरा उनीहरुलाई मात्रै थाहा होला । माओवादीले सोचिरहेको छ, हामीले लडाकु घर पठाउने कार्य गरेर केही राम्रो गर्‍यौ के माओवादीका लडाकुहरुले साच्चिकै पार्टीले राम्रो गर्‍यो भन्ने सोचेका छन त ?
मनको कुरा बुझ्न कसले पो सकेको छ र? आफ्नो पीडा आफैसँग । केही शिविरबाट गएपछि अन्य पार्टी प्रवेशसमेत गरे । केही एकीकृत नेकपा माओवादीमै लाग्ने बताएका छन्।
साच्चनै सँगै बसेका आफ्ना साथीसँगको त्यो समयको रमाइलो क्षण अनि विभिन्न गतिविधिहरुलाई छाडेर आफ्नो घर जानुपर्दा कस्तो महसुस भयो होला ? सोचनीय विषय छ। घरमा आमाबाबा खुसी त होलान तर सन्तुष्ट छैनन होला ।
जम्मा २२ हजार दिएर लडाकुलाई घर पठाउनु भनेको एउटा ठूलो बेइजति हो भन्ने विचार पनि उत्पन्न गराउन सक्छ । यस्तो महंगो जमानामा २२ हजारले के गर्न सकिन्छ र ? प्रश्नै प्रश्नले भरिएको लडाकुहरुको व्यथा कसैले बुझ्न सकेको छैन। यसको अर्थ सबै लडाकु सेनामा समायोजन गनर्ेे भन्ने पनि होइन तर के चाहिँ हो भने शिविरबाट बाहिर गए आफु समाजमा बाच्नसक्ने हुनुपर्‍यो । पढ्ने बेलामा युद्ध गएपछि कसरी केको मार्फत जीवन चलाउने केही सोच्न जरुरी छ। कुरो र कुलो जता लगाए पनि बग्छ त्यसैले सबको सहमतिमा बनेको सरकार अनि जनताको साथ पाएको माओवादीको सहमतिमा नै यसो भएकाले ठिकै होला भन्ने बुझ्नुपर्छ।
Filed under: Headlines | Tagged: लडाकु |
« कहाँ हराईन यी हिरोइन ? ताज महलको चमक घट्दै »